बच्चाहरुलाई झगडा गर्न छुट दिएकै जाति ! « Kakharaa
बच्चाहरुलाई झगडा गर्न छुट दिएकै जाति !
काठमाडौं । घरमा बालबच्चा आपसमा झगडा गर्छन् । दाजु–भाई, दिदी–बहिनीबीच सानोतिनो कुरामा मनमुटाव हुन्छ । उनीहरु एकअर्कासँग झगडा गर्छन् । कुटाकुट गर्छन् । रुन्छन् । घुक्र्याउँछन् । त्यसपछि ?
हामी आमाबुवा के गर्छौ र ?
हामीलाई थाहा छ, लडाई–झगडा ठिक होइन । मिलेर बस्नुपर्छ । ज्ञानी हुनुपर्छ । के आज तपाईं बच्चाजस्तै झगडा गर्नुहुन्छ ? के तपाईं अघिको सबै सत्रुता भुलेर पुन हार्दिकतासाथ मिल्नुहुन्छ ?
बाल्यकालमा चुपचाप लागेको रु बाल्यकालमा ज्ञानी भएर बसेको ?
होइन, बाल्यकालमा गरेको फटाई, धुत्र्याई, नोकझोक, झगडा, लुछाचुडी । यीनै कुरा सम्झेर तपाईं आज आफ्नो बाल्यकालमा र्फकन चाहनुहुन्छ । बाल्यकालमा आफ्ना दाजुभाई दिदीबहिनीलाई दुःख दिएको, खानेकुरा खोसेर वा लुकाएर खाएको, लुगाको निहुँमा झगडा गरेको, खेल्दाखेल्दै कुटाकुट गरेको स्मरण गर्नुहोस् त, तपाईंको मन यसै–यसै रोमाञ्चित हुनपुग्छ । यदि त्यसबेला हामीलाई झगडा गर्न नदिएको भए रु खेलौना चोर्न र लुकाउन नदिएको भए रु खानेकुरा खोस्न नदिएको भए रु आज बाल्यकालको त्यो स्मरण हामीसँग रहँन्थ्यो र ?
लडाई–झगडा नराम्रो हो । यसले सही नतिजा दिदैन । हामी यसै भन्छौ । तर, मनमा तुष राखिएर, मनमा अनेकौ कुष्ठा, रिस–राग राखेर गरिएको झगडाले नराम्रो नतिजा दिने हो ।
उनीहरु एकअर्कालाई कुटाकुट गर्छन् । रुन्छन् । तब मन सफा हुन्छ । अघिसम्मको रिसराग पखालिन्छ । यो पनि एक किसिको फाइदाजनक अभ्यास नै हो । मनमा कहिलेसम्म रिस र राग बोकेर हिँड्ने रु कहिलेसम्म कुष्ठा पाल्ने रु